Ny kinova Emirates mora mieritreritra bebe kokoa dia mety hipoitra aorian'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny kinova Emirates mora mieritreritra bebe kokoa dia mety hipoitra aorian'ny COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Jona 22, 2021
Ny famantarana voalohany fa ny Emirates - toy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany - dia nitodika tany amin'ny fihemorana ara-bola dia nipoitra tamin'ny volana martsa 2020, raha ny tompony faratampony, ny Governemantan'i Dubai, dia niantoka tsindrona fananana ho an'ny mpitatitra.
Ny vidin'ny mpiasa tamin'ny zotram-piaramanidina dia nidina 3.45% ary 4.4% tamin'ny taona 2018-19 sy 2019-20.
Ao anatin'ny fiorenan'ny fisidinan'ny sidina sy ny tsenan'ny solika, ny vidin'ny solika jet dia nihena 75.6% ihany koa, hahatratra ny AED6.4 miliara tamin'ny taona 2020-21.
Ny tsindrona AED11.3 miliara ($ 3.1 miliara) dia mbola tsy nisy toa izany tamin'ny tantaran'ny Emirates.
Ny fiatraikany lalina amin'ny valan'aretina COVID-19 amin'ny fiaramanidina dia naverin'ny mpitondra saina any Dubai Emirates'fahombiazana nandritra ny taom-piasana 2020-21, izay nahitana fatiantoka AED20.3 miliara (5.5 miliara dolara) ary fidinana 66% hatramin'ny AED30.1 miliara (8.4 miliara dolara). Na dia mbola mitazona ny fanapahany ny tsena aza ny kaompaniam-pitaterana raha oharina amin'ny haben'ny asa aman-drakitry ny lova, ny fivoaran'ny toerany ara-bola tao anatin'ny folo taona lasa - nohamafisin'ny fiantraikan'ny COVID-19 - dia manome soso-kevitra iray momba ny Emirates izay mety ho mailaka amin'ny vidiny. taorian'ilay areti-mandringana.
Ny famantarana voalohany fa ny Emirates - toy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany - dia nitodika tany amin'ny fihemorana ara-bola dia nipoitra tamin'ny volana martsa 2020, raha ny tompony faratampony, ny Governemantan'i Dubai, dia niantoka tsindrona fananana ho an'ny mpitatitra. Ny tsindrona AED11.3 miliara ($ 3.1 miliara) dia mbola tsy nisy toy izany teo amin'ny tantaran'ny Emirates ary nampahatsiahy ny maha-zava-dehibe azy io - na ara-barotra na ara-tsosialy - ny fitohizan'ny zotram-piaramanidina dia ny toekaren'i Dubai. Ny fanarenana azy dia hiankina amin'ny fahafahany mitantana amin'ny fomba mahomby ny vidin'ny fandidiana, izay nidina hatramin'ny AED46 miliara tamin'ny taon-dasa, avy amin'ny AED85.5 miliara tamin'ny 2019-20.
Rehefa avy niatrika ny krizy ara-bola manerantany tamin'ny taona 2008-10 sy ny fianjeran'ny vidin-tsolika tamin'ny taona 2014-16, mpiasa eo amin'ny Emirates 30,585 no noroahina tamin'ny taona 2020-21 voalohany teo amin'ny tantaran'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny fihetsika noho izany dia nampidina ny vidin'ny mpiasa hatramin'ny 35%, hatramin'ny AED7.8 miliara, fa ity fihenana ity dia tsy fironana vaovao.
Ny vidin'ny mpiasa ao amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia nihena 3.45% ary 4.4% tamin'ny 2018-19 sy 2019-20, ary somary nitotongana hatrany hatramin'ny fivontosan'ny tampon'ny fitomboana 20 taona tamin'ny 2010-11.
Ao anatin'ny fiorenan'ny sidina sy ny fiovan'ny tsenan'ny solika, ny vidin'ny solika jet dia nihena 75.6% ihany koa, hahatratra ny AED6.4 miliara amin'ny taona 2020-21 raha avy amin'ny AED26.2 miliara tamin'ny taona lasa. Ny vidin'ny solika Brent dia 41 $ ny barila iray ary nihena ny ambany tamin'ny taon-dasa, izay nahazo tombony ho an'ny tsipika farany ambany an'ny Emirates. Saingy, ny vidiny dia antenaina ho $ 63 isan-barila amin'ity taona ity ary mety hampiakatra ny vidin-tsolika jet mandritra ny taom-piasana 2021-22 an'ny Emirates, indrindra raha toa ka tanteraka ny tombana amin'ny fitakiana ny fitakiana fitetezam-paritany.
Manerana ny vondrona Emirates, ny fepetra fampihenana ny vidiny dia nahatonga ny tahiry AED7.7 miliara tamin'ny taona 2020-21. Mety hipoitra ny fepetra hafa toy izany, raha jerena ny fiatraikan'ny COVID-19, anisan'izany ny lalantsara fitetezana an'i Emirates miaraka amin'i India sy UK.
Nianjera ny fiaramanidina prototype tany Russia namono ny olona rehetra ...
J&J COVID Booster Vaccine dia mahazo jiro maitso
Tsy misy fizahan-tany, tsy misy COVID, fa afaka farany: ny Repoblika ...
Minisiteran'ny fizahantany sy fiaramanidina Bahamas ...
Hawaii dia mitatitra ny fipoahan'ny volkano vaovao
Fiaran-dalamby mora vidy avy any Londres ka hatrany Edinburgh
Ethiopian Airlines voarohirohy ho nanao fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ...
Chypre dia manao fitsapana COVID-19 isan-kerinandro ho an'ny rehetra ...
Kamiao rallye Honda Pass2022 XNUMX hifaninana amin'ny Amerikanina ...
IGLTA dia mifidy seza Kolombiana voalohany ho an'ny Birao ...
Kirk Ziehm nanendry Tale jeneralin'ny Buildout vaovao
Nihidy tamin'ny firenena manontolo i Nouvelle-Zélande noho ny COVID iray ...
Fianarana mialoha ny fampisehoana maimaimpoana ao amin'ny IMEX America
Ahoana no hahavelomanao ny bibidia manafika anao?
Volocopter Chengdu: fiaramanidina iraisana alemanina-sinoa vaovao ...
Bangkok dia miomana amin'ny traboina amin'ny tondra-drano lehibe
Ny fampidinana ny vidin'ny rojom-bidy ao amin'ny Aerospace sy ...
OTDYKH Expo any Rosia fahombiazana manaitaitra
CDC: Izay vaksiny nankatoavin'ny OMS dia tsara amin'ny fidiran'i Etazonia
Inona no Vaovao any The Bahamas amin'ny Oktobra
Inona no dikan'ny isa azo avy amin'ny trosa?
Manchester United sy Maltas tantaran'ny fahombiazana ...
Ny fananganana ny Maison Décotterd dia ankalazain'i ...
Tonga soa eto Malta ireo mpifindra monina nomerika hijanona maharitra miaraka amin'ny ...
Sidina amin'ny Flyr sy Vueling avy any Milan Bergamo izao
Ny firenena UNWTO dia mila famonjena ary mamaly i Saudi Arabia ...
Mandefa fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i Sue ny fizahantany ao Jamaika ...
Fampitandremana momba ny fahasalamana any Canada: Tsy mahasalama loatra ireo mpanadio tanana
Fivoriambe isan-taona IATO efa napetraka amin'ny volana desambra ao amin'ny ...
Niala tamin'ny politika ny filohan'i Filipina
Live It: Manitatra ny fandaharana maharitra i Saint Lucia
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Ankehitriny dia mandray ...
Sidina Serieux tsara ankehitriny amin'ny A220-300
Ny Alaska Airlines dia mamoaka an'i San Francisco Giants misy lohahevitra ...